डा. केसीले अफवाहकाे खण्डन गरेपछि झुक्याे सरकार, 'खुला मञ्चमा वार्ताकाे अाह्वान'
नेपालपाना प्रकाशित: २०७५-३-२७ गते | 6012 पटक हेरिएको
काठमाडौं । १२ दिनदेखि चिकित्सा क्षेत्र सुधारसम्बन्धी माग राखेर जुम्लामा आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीले वर्ताकाे लागि तयार नभएको सरकारी भनाइ प्रकाशमा आइरहेका बेला विज्ञप्तिमार्फत खण्डन गरेपछि सरकार झुक्न बाध्य भएकाे छ।
विज्ञप्तिमार्फत उक्त सरकारी भनाइलार्इ खण्डन गर्दै कुनै पनि बेला अाफु वार्ताका लागि तयार रहेकाे डा. केसीले स्पष्ट पारेका छन्। उनले आफू वार्ताका लागि सधैं तयार रहेको भन्दै सरकारलाई यसको गृहकार्यमा जुट्न आग्रह गर्न साथ सत्तारुढ दलका नेताहरु वर्ताकाे लागि सरकार तयार रहेकाे अभिब्यक्ति दिइरहेका छन् । यसकाे अर्थ सरकार वर्ताकाे लागि केही हदसम्म सकारात्मक रहेकाे छ।
साेही क्रममा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले डा. गोविन्द केसीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् । नेता भट्टराईले केसीको जीवन रक्षा र जायज माग पूरा गर्नका लागि सरकार र आफ्नो पार्टी दुवै तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
डाक्टर केसीको हठले समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै भट्टराईले काठमाण्डौ आएर उपचार गरिसकेपछि वार्तामा बस्न आग्रह गरे । “तपाई काठमाण्डौ आउनुस् । वार्ता गर्न सरकार तयार छ । अनशन बसिरहनु पर्दैन ।”–उनले भने ।
जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता अधिकार दिनका लागि सरकार तयार रहेको जिकिर गर्दै भट्टराईले केसी कहिले काठमाण्डौ र कहिले जुम्ला पुगेर अनशन बस्न नपर्ने बताए ।
“गोविन्द केसीसँग बन्द कोठाभित्र होइन, खुला मञ्चमा बसेर वार्ता गर्न तयार छौँ । सबै टेलिभिजन बोलाएर प्रत्यक्ष प्रशारण गर्दै वार्ता गरौँ । यसका लागि अनशन तोड्नुस, स्वस्थ हुनुस् ।” भट्टारईले भने ।
हरेक पटकको अनशन मेडिकल शिक्षाको भर्ना खुल्ने समयमा बस्ने गरेको भन्दै उनले केसीको अनशनको उद्देश्य नै शंकास्पद रहेको दाबी समेत गरेका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले बलात्कार रोक्नका लागि नेपालमा यौनजन्य अश्लिल (पोर्न) साईटहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएपनि पोर्न साइट भने बन्द हुन सकेका छैनन् । सुचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल..
कम्युनिष्ट मन्त्री गोकर्ण विष्टको ठुलो चलखेल, जसका कारण रोकियो यति ठुलो काम
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट एकपछि अर्को कारणले चर्चामा आउने गरेका छन् । केही समय अघि एउटा अन्तर्राष्टियस्तरको बैठकमा अँग्रेजी पढ्न नजानेर..
कसले फैलायो महोत्तरीमा सन्त्रास? आर्मीले रित्तो झोला डिस्पोज गरेपछि....
काठमाडौं । महोत्तरीमा इटा हालेको एक झोला भेट्टिँदा स्थानीयमा सन्त्रास छाएको छ । महोत्तरी गाउँपालिकाको पुल नजिकै बेवारिसे आवस्थामा फेला परेको झोलामा बम रहेको आसंकामा केही समय स..
चीनका यी एजेन्टको साथ पाएका प्रचण्डले सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएसंगै बुढीगण्डकी यसरी पुग्यो गेजुवाको हातमा !
काठमाडाैं । राष्ट्रिय गाैरवका आयोजना नेपाल आफैले बनाउने भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजना मन्त्रिपरिष..